ကင်ဆာရောဂါ အဆင့်(၃)ခံစားနေရတဲ့ အသက်(၆)နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်လေးအတွက် လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မီးနိုနဲ့ဆောင်းယွန်းစံ – Shwe Nay Chi
ကင်ဆာရောဂါ အဆင့်(၃)ခံစားနေရတဲ့ အသက်(၆)နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်လေးအတွက် လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မီးနိုနဲ့ဆေ ာင်းယွန်းစံ
လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီး တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာ တစ်ထေ ာင့်တစ်နေရာကနေ ပါဝင်အားဖြည့်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ အဆိုတော်မီးနိုနဲ့ သရုပ်ဆောင် ဆောင်းယွန်းစံတို့ကလည်း အပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
လိုအပ်နေသူတွေအတွက် တတ်နိုင်သလောက် အမြဲဖေးမကူညီတတ်တဲ့ သူမတို့နှစ်ယောက်ကတော့ ဒီမှာလည်း အဆုတ်ကင် ဆာ အဆင့်(၃) ရောဂါဝေဒနာကို ခံစားနေရရှာတဲ့ အသက် (၆ )နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်လေးအတွက်လည်း လှူဒါန်းမှုတွေ ပြု လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်..။
အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် အဆုတ်ဝေဒနာအဆင့်(၃)ကို ခံစားနေရပြီး ဆေးကုသဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေရှာတဲ့ အသက်(၆)နှစ်အ ရွယ် မောင်ဝေယံအတွက် လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ရင်း ပရိသတ်တွေကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းလာပါတယ်..။
မိဘတွေအနေနဲ့ကလည်း ချို့တဲ့ပြီး အဆင်မပြေတဲ့ကြားက ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ(၂) ကြိမ် (၃)ကြိမ်ဖောက်ထားတဲ့ သားလေးအ တွက် ဆေးကုပေးနေပေမယ့် လတ်တလောမှာ ဆက်လက်ကုသဖို့ ငွေကြေးအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကို မီးနိုက ပြေ ာပြာထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
“သည်အချိန်ဘယ်လိုမှ သည်တိုင်းမနေနိုင်လို့ တင်ပါရစေဗျာ။
သည်သားလေးက နာမည်က ဝေယံ ၊အသက် ၆ နှစ်၊ အဆုတ်ကင်ဆာ Level3တဲ့ဗျာ။
မိဘကလည်း အဆင်မပြေတဲ့ကြားက ကလေးကို တက်နိုင်သ မျှ ကုပေးနေကြတယ်၊ ကျွန်တော်အရင်နေခဲ့တဲ့လမ်းထဲမှာတ ည်းက အိမ်က အဝတ်အထည်လျှော်/မီးပူတိုက်ဖို့ အပ်ဖူးနေတော့သိနေတာပါ၊
လမ်းထဲမှာနေတုန်းက အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ အဲ့ကလေးကိုမမြင်ဖူးခဲ့ဘူး၊ခုမှ သူ့အမေနဲ့ကျတော့်အမေဖုန်းနဲ့စကားပြောနေတုန်း ရ သမျှအလှူငွေလေးနဲ့ ကလေးမိဘတွေ နည်းနည်းငွေဝန်ပေါ့အောင် (ကင်ဆာဆိုတည်းက ငွေဘယ်လောက်ကုန်လိုက်မလဲဗျာ သူတို့မှာ မတက်နိုင်ကြဘူး)
ကိုယ်တက်နိုင်တဲ့ ပိုစ့်လေးနဲ့ အလှူခံပေးမယ်တွေးမိလိုက်လို့ သူ့အမေနဲ့စကားပြောပြီး ပုံလေးတွေတောင်းပြီး ကြည့်လိုက်တော့မှ စိတ်မကောင်းလိုက်တာဗျာ။ကလေးခမျာ ဝေဒနာတွေဘယ် လောက်ခံစားရရှာမလဲ၊အစကတော့ လိုင်းပေါ်ကနေမတင်ဘဲ ကိုယ့်အသိမိတ်ဆွေထဲက
ပရဟိတအဖွဲ့၊အလှူရှင်တွေနဲ့ချိတ်ပေးမယ်တွေးမိပေမယ့် ကိုယ်တက်နိုင်တာ ကိုယ့်ရှေ့ရောက်လာတဲ့ ကိုယ်မြင်ရတဲ့ ဒုက္ခဆို မနေနိုင်ဘူးဗျာ။
တက်နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန် ကူပေးလိုက်ချင်တယ်၊ ဒါကြောင့် post လေးတင်ပြီးအကူညီတောင်းပါရစေဗျာ။တက်အားသ ရွေ့လှူချင်တဲ့သူတွေ လှူတော့လည်း ကလေးဆေးကုဖို့ ကုန်ကျငွေလေးပိုထွက်လာတာပေါ့။
ခုဆို ရိုးတွင်းချဥ်ဆီဖေါက်တာ ၂/၃ ကြိမ်လောက်ရှိပြီပြောတ ယ်၊လာမယ့် တနင်္လာနေ့ ဖေါက်ရမလားမသိဘူး။ စိတ်အတော်မကောင်းဘူးဗျာ။
P.S မိဘကိုခွင့်တောင်းပြီးမှ တင်တာပါ၊ သူတိူ့ခမျာ လုပ်ပေးမယ်ပဲပြောရသေးတယ် အရမ်းကျေးဇူးတင်နေတာ။တက်အားသရွေ့ကူညီပေးကြရအောင်နော်။
မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ လှူချင်သူပဲရှိရှိ၊ကင်ဆာအတွက်ပရဟိတ အဖွဲ့အစည်းအသိရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် cb ကနေ ကူညီပြောပြ အ ကြံပေးကြပါဦးဗျာ။အိမ်မှာထိုင်နေရင်း တက်အားသရွေ့ကုသို လ်လေးယူကြစို့ဗျာ။ ??
ကိုယ် တတ်နိုင်သလောက်ထဲက အလှူ လေး ထည့်ပေးစေချင်ပါတယ်
ကို အားမာန်က ဒီကလေးလေးတွက် ကိုယ် တိုင်သွားလှူပေးမှာပါ ကျေးဇူးအါအကိုရေ သားလေးလည်း မြန်မြန်ပြန်ကောင်းပါစေ ?
K Pay number
U Yan Naing Soe Naung
ဒီk pay ထဲ ထည့်လှူပေးလို့ရပါတယ် ??..” ဆိုပြီး ဝေဒနာရှင် ကလေးရဲ့မိသားစုအခက်အခဲတွေအပြင် စေတနာရှင်တွေ လှူဒါန်းနိုင်ဖို့ကိုလည်း ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အခုလို အရွယ်လေးနဲ့မလိုက်အောင် ရောဂါဝေဒနာရဲ့ ဖိနှိမ့်မှုဒဏ်တွေကို အလူးအလဲခံစားနေရရှာတဲ့ သားငယ်ခေးအတွက် ပရိသတ်တွေကလည်း စိတ်မကောင် းဖြစ်ကာ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်လှူဒါန်းနေကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။
ထိတ်တုံးခတ်ပြီး အပြစ်ပေးခံထားရတာတောင် သီချင်းတွေအော်ဆိုရင်း ပျော်ပျော်နေနေကြတဲ့ တောထဲက Gen Z လူငယ်လေးတွေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်